South African Coal Price Surge, While Others Languish, Is Troubling: Russell | Myanmar Business Today
Home Business International South African Coal Price Surge, While Others Languish, Is Troubling: Russell
The daily Richards Bay index, as assessed by commodity price reporting agency Argus, jumped 44 percent from $56.54aton on September 25 toarecent high of $81.30 on November 28.
It has since retreated slightly to end on Wednesday at $81.30aton, but the Richards Bay outperformance over other benchmarks has been staggering.
The price of thermal coal delivered into northwest Europe dropped 16 percent fromarecent high of $64.07aton on Sept. 16 to the close on Wednesday of $54.04.
The weekly index for benchmark Australian thermal coal at Newcastle port has traded sideways in recent months, going from $63.22aton in the week to September 27 to $65.31 in the week to November 29.
Richards Bay exports were 6.08 million ton in November, according to vessel-tracking and port data compiled by Refinitiv, down slightly from 6.89 million in October.
India’s imports of coal from all countries did tick up in November to 16.36 million ton from 14.78 million in October.
But the increase wasn’t driven by additional demand for South African coal, with India’s imports from Richards Bay coming in at 2.99 million ton in November, up slightly from 2.69 million in October.
အအေးဓာတ်နည်းသော မြောက်ပိုင်းဆောင်းရာသီတွင် တရုတ်၊ အိန္ဒိယနှင့် ဥရောပနိုင်ငံများမှ ကျောက်မီးသွေး ဝယ်လိုအားငြိမ်နေသောကြောင့် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းကျောက်မီးသွေး ဈေးနှုန်းများသည် အတက်အကျမရှိဘဲ ငြိမ်နေသည်။ သို့သော် ချွင်းချက်တစ်ခု ရှိနေသည်။
တောင်အာဖရိကနိုင်ငံမှ ကျောက်မီသွေးတင်ပို့မှုဈေးနှုန်းများမှာ ပြီးခဲ့သည့်လများအတွင်းက တက်လာခဲ့သည်။ ထိုကဲ့သို့ တက်လာမှုမှာ ဈေးကွက်အနေအထားများနှင့်‌မကိုက်ညီသကဲ့သို့ ဘာကြောင့်ဖြစ်သည်ဆိုသည်ကိုလည်း ရှင်းပြရန် ခက်ခဲ့သည်။
Richards Bay အညွှန်းကိန်းများမှာ စက်တင်ဘာလ ၂၅ ရက်နေ့တွင် တစ်တန်လျှင် အမေရိကန်‌ဒေါ်လာ ၅၆ဒသမ၅၄ ဒေါ်လာရှိခဲ့ရာမှာ နိုဝင်ဘာလ ၂၈ ရက်နေ့တွင် တစ်တန်လျှင် အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၈၁ဒသမ၃၀ ဒေါ်လာအထိ တက်လာခဲ့သည်။
ဥရောပတိုက် အနောက်မြောက်ပိုင်းသို့ တင်ပို့သည့် ကျောက်မီးသွေးဈေးနှုန်းမှာ စက်တင်ဘာလ ၁၆ ရက်နေ့တွင် တစ်တန်လျှင် အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၆၄ဒသမ၀၇ ဒေါ်လာရှိခဲ့ရာမှာ ပြီးခဲ့သည့် သီတင်းပတ် ဗုဒ္ဓဟူးနေ့တွင် တစ်တန်လျှင် အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၅၄ဒသမ၀၄ ဒေါ်လာသို့ ၁၅ ရာခိုင်နှုန်းကျဆင်းခဲ့သည်။
နယူးကာဆယ် ဆိပ်ကမ်းရှိ သြ‌စတြေးလျ ကျောက်မီးသွေးဈေးနှုန်းမှာ စက်တင်ဘာလ ၂၇ ရက်နေ့က တစ်တန်လျှင် အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၆၃ဒသမ၂၂ ဒေါ်လာရှိခဲ့ရာမှာ နိုဝင်ဘာလ ၂၉ ရက်တွင် တစ်တန်လျှင် အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၆၅ဒသမ၃၁ ဒေါ်လာရှိနေသည်။
အဆိုပါ ကိန်းဂဏန်းသုံးခုကို ယှဥ်ကြည့်သည့်အခါတွင် တောင်အာဖရိက ကျောက်မီးသွေး၏ ဈေးအနေအထားမှာ အခြားသော ဒေသများနှင့် ယှဥ်လျှင် အတန်ပင် ကွာခြားနေသည်ကို တွေ့ရသည်။
သို့သော် ဘာကြောင့် ထိုကဲ့သို့ ဖြစ်ရသည်ဆိုသည်နှင့် ပတ်သက်၍ ရှင်းပြနိုင်လောက်သည့် အကြောင်းတရားလည်းမရှိပေ။
နိုဝင်ဘာလတွင် Richards Bay ရှိ တင်ပို့မှုများမှာ တန်ချိန် ၆ဒသမ၀၈ သန်းရှိပြီး အောက်တိုဘာလနှင့် ယှဥ်လျှင် အနည်းငယ်လျော့ကျသွားခဲ့သည်။ အောက်တိုဘာလတွင် တင်ပို့မှုမှာ တန်ချိန် ၆ဒသမ၈၉ သန်းရှိခဲ့သည်။
မည်သို့ ဆိုစေ အောက်တိုဘာလသည်ကား ပြီးခဲ့သည့် ဒီဇင်ဘာလမှစကာ ကြည့်လျှင် အနေအထားကောင်းဆုံးဖြစ်ပြီး နိုဝင်ဘာလ၏ တင်ပို့မှုများမှာ ယခုနှစ်တွင် စတုတ္ထမြောက် အမြင့်ဆုံးလလည်း ဖြစ်သည်။
တောင်အာဖရိက၏ ကျောက်မီးသွေးတင်ပို့မှုအများစုမှာ အာရှတိုက်သို့ ဦးတည်နေပြီး အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာ အများဆုံး ဝယ်ယူတင်သွင်းသည့် နိုင်ငံလည်းဖြစ်သည်။
နိုင်ငံပေါင်းစုံမှ ကျောက်မီးသွေး ဝယ်ယူတင်သွင်းခဲ့သည့် အိန္ဒိယနိုင်ငံ၏ ကျောက်မီးသွေးတင်သွင်းမှုမှာ နိုင်ဝင်ဘာလတွင် တန်ချိန် ၁၆ ဒသမ ၃၆ သန်းရှိပြီး အောက်တိုဘာလတွင် တန်ချိန် ၁၄ဒသမ၇၈ သန်းရှိခဲ့သည်။
သို့သော် ထိုကဲ့သို့ တိုးတက်လာမှုမှာ တောင်အာဖရိကကျောက်မီးသွေးများအတွက် ဝယ်လိုအားများမသွားစေခဲ့ပေ။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော Richards Bay တွင် အိန္ဒိယ နိုင်ငံ၏ ဝယ်ယူတင်သွင်းမှုမှာ အောက်တိုဘာလတွင် တန်ချိန် ၂ဒသမ၆၉ သန်းရှိခဲ့ရာမှ နိုဝင်ဘာလတွင် တန်ချိန် ၂ဒသမ၉၉ သန်းသာရှိသဖြင့် အနည်းငယ်သာ တိုးတက်လာခဲ့သည်။
SOURCEClyde Russell (Reuters)
Previous articleUnicredit Says To Buy Back Stock This Year, Cut9Percent of Staff
Next articleU.S. Objects to World Bank’s Lending Plans for China